Barnaamijka Starbucks wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato heesaha aasaaska halka aad joogto | Wararka IPhone
Barnaamijka rasmiga ah ee Starbucks wuxuu kusii wadaa hogaaminta warshadeeda. Waa mid ka mid ah qalabka ugu dhameystiran ee la socda macaamiisha kuwaas oo sida caadiga ah kafee ka iibsada mid ka mid ah hay'adahaas oo ku baahsan adduunka. Hawl cusub oo xiiso leh ayaa hadda lagu daray suurtagalnimada in amarro la soo mariyo iyadoo la adeegsanayo arjiga, ka shaqeynta lacag-bixinta iyo qodobbada xakamaynta: awoodda lasoco heesaha socda xarumaha aad jeceshahay.
Qalabku wuxuu u shaqeeyaa sida soo socota: marka hees aad jeceshahay ay ciyaarayso, gudaha dukaan Starbucks ah, furi codsiga oo guji xulashada muusikada. Isla markiiba barnaamijka ayaa ku tusi doona heesta la qaadayo daqiiqadahaas meel lagu sheegay. Badhan ayaa soo muuqan doona oo kuu oggolaan doona inaad ku darto heestaas liiskaaga Spotify.
Xaqiiqdii, suurtagalnimadan, oo u shaqeysa si la mid ah barnaamijka «Shazam», waa suurtagal mahadsanid iskaashiga u dhexeeya Spotify iyo Starbucks. Shirkadaha ayaa kala saxiixday heshiis gacansaar sannado badan soconaya kaas oo ka caawin doona shirkadda Spotify inay kororto tirada isticmaaleyaasheeda, haatanna adeegyada kale sida Apple Music ayaa cagaha la galay
Waxay umuuqataa in doorashadan laga heli doono gudaha Mareykanka xilligan. Starbucks ma aysan shaacinin goorta balaarinta adeegan ay dhici doonto, taas oo, shaki la’aan, ay si weyn uga faa’iideysan doonto shirkadda Spotify.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Barnaamijka Starbucks wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato heesaha aasaaska halka aad joogto
HBO waxay imaan doontaa Spain sanadkan